Waqtiga ugu Fiican ee Aad Ku Soo Booqo Japan
Kaarka SIM-ka iyo Pocket Wifi
Waqtiga Japan hadda
Imbaraadoor & Calan
Dhulgariir & Volcanos
Goobaha la xiriira Jabaan
Nolosha iyo Dhaqanka
Is waafajinta dabeecadda
Dabeecaddu waxay na baraysaa "Mujo"
Xiro Jiilaal Jabaan
Xiro Jiilaalka Hokkaido
Xiro Guga Jabaan
Xiro Xagaaga Japan
Xiro dayrta ee Japan
Wada noolaanshaha dadka
Akhlaaqda & Kastamka
Ciyaarta Kooxda Jabbaan
Xiriirka Qoyska Jabbaan
Sawirro: Arooska Jabbaan
Sawirada: Dhaqanka Bamboo
Sawirada: Naqshadeynta Iftiiminta ee Japan
Sawirro: Gawaarida Kei
Tigidhada iyo Booqashada
Cuntada & Cab
Xayawaanka iyo Kalluunka
Macbudyo iyo Meelo Shisheeye
Itineraries ugu Fiican
Dhul gariir Tohoku
Sawirro: Badda Gudaha
Hoteel iyo Ryokan
Shinkansen (Tareenka Bullet)
Madaarka cusub ee Chitose
Xilliyada la yaabka leh, Nolosha iyo Dhaqanka
Ku soo dhawow Japan!
Guji magaalo, qeybta, ama gobolka si aad u fiiriso maqaalka. Hadaadan gujin karin khariidadda, fadlan dhagsii badhanka hoose oo dooro magaalada, qeybta ama qeybta aad rabto inaad aragto.
Gobollada iyo gobolada
Sawirada: Macbadka Kiyomizudera ee Kyoto
Goobaha ugu caansan ee dalxiiska ee Kyoto waa Fushimi Inari Shrine Shrine, Kinkakuji Temple iyo Kiyomizudera Temple. Macbadka Kiyomizudera waxa uu ku yaalaa jiirada buur ku taal dhanka bari ee magaalada Kyoto, muuqaalka hoolka weyn ee uu ka kooban yahay oo dhererkiisu yahay 18 mitir ayaa ah mid cajiib ah. Aan aado safar macmal ah oo ku aado Macbadka Kiyomizudera! Sawirada Macbadka Kiyomizudera ee Kyoto ee Kyoto = Shutterstock Kiyomizudera Temple ee Kyoto gudaha Kyoto = Shutterstock Kiyomizudera Temple oo ku yaal Kyoto = Khariidadda Shutterstock ee Macbadka Kiyomizudera xuduud-map dp-map-centered" zoom="100" jiidaya = " run " controls = " run "] Waan ku qanacsanahay inaad akhrido ilaa dhammaadka. Ku noqo"Best of Kyoto"Mowduucyada la xiriira: Sawirada: Macbadka Kodaiji ee Kyoto Sawirada: Macbadka Nanzenji ee Kyoto Sawirada: Sixirka Macbadka Rurikoin ee Kyoto Sawirada: Midabada Dayrta ee Macbadka Tofukuji, Sawirada Kyoto: Daitokuji Temple ee Kyoto -Dunida Zen waxay la mid tahay Nature Kyoto ! 26 Soojiidashada ugu Fiican: Fushimi Inari, Kiyomizudera, Kinkakuji iwm Sawirro: Eikando Zenrin-ji Temple-Macbadka leh midabada dayrta ee ugu quruxda badan Sawirada: Kyoto Imperial Palace (Kyoto Gosho) Sawirada: Kyoto dhaqameed Sawirada Xagaaga: Cherry blossoms in Kyoto Sawirada: Wabiga Kamogawa ee Kyoto Sawirada: Caleemaha Dayrta ee Kyoto
Photos Goobaha Barafka
Sawirro: Tuulooyin baraf ah oo ku yaal Japan
Waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago muuqaalka tuulooyinka barafku ee Japan. Kuwani waa sawirada Shirakawa-go, Gokayama, Miyama iyo Ouchi-juku. Maalin, waxaad ku raaxeysan doontaa adduunka saafiga ah ee tuulooyinkan! Sawirada tuulooyinka uu baraf daboolay Shirakawago (Maamulka Gifu) Shirakawago, Gifu Prefecture Shirakawago, Gifu Prefecture Shirakawago, Gifu Mapka Shirakawago ="discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="100" jiidaya =" run " controls = " run ah "] Gokayama (Toyama Prefecture) Gokayama, Toyama Prefecture Gokayama, Toyama Mapka Deegaanka ee Gokayama [map address="Gokayama" width="500%" height="87px" api="AIzaSyDvB8bpqAqs_d8wlvYARF3obRvaO4PEN8" theme="discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom " jiidaya = " run " controls = " run ah "] Miyama (Maamulka Kyoto) Miyama, Kyoto Prefecture Miyama, Kyoto Map of Miyama [map address="Miyama, Kyoto" width="100%" height="500px" api= "AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="8" jiidaya = " run" controls = " run ah "] Ouchi-juku (Fu) kushima Prefecture) Ouchi-juku, Fukushima Prefecture Ouchi-juku, Fukushima Prefecture Map of Ouchi-juku class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="100" jiido = "true" controls="run"] Waxa la xidho marka aad booqanayso tuulooyinka barafka leh Waxaan kuugu mahadnaqayaa inaad akhrido ilaa dhamaadka. Ku laabo "Meelaha Barafka" Qoraallada la xiriira: Sawirro: Mt. Fuji oo baraf daboolay 500 Goobaha barafka ee ugu wanaagsan Japan: Shirakawago, Jigokudani, Niseko, dabbaaldegyada barafka ee Sapporo ... Sawirrada: K-baabuurta Japan Sawirrada: Sakura- Cherry ubaxyada Sawirada Japan: Miharu Takizakura - Geedka cherry ee ugu fiican Japan! Sawirro: San'in -Dhul dahsoon oo ay ku hadhsan tahay Japan-dii hore! Sawirro: Nara -Caasimadda qadiimiga ah ee Japan Ku soo dhawoow Japan! Ku raaxayso 87 sawir oo qurxoon! Sawirrada: Afarta xilli ee Kamikochi Sawirrada: Odaiba ee Tokyo Bay Sawirrada: Sawirrada Hakodate: Ise Jingu Shrine ...
Sawirada: Biei iyo Furano xagaaga
Goobaha ugu caansan ee loo dalxiis tago Hokkaido xagaaga waa Biei iyo Furano. Meelahan, oo ku yaal bartamaha Hokkaido, waxay leeyihiin bannaano qallafsan. Ubax midab leh ayaa halkaas ka soo baxa. In aad aragto isbeddelka dabiicadda ee bannaankan waxa ay bogsiin doontaa maskaxdaada. Dhanka Biei iyo Furano, waxaan horey u qoray maqaallo. Si kastaba ha ahaatee, waxaan jeclaan lahaa in aan soo bandhigo quruxda beerta xagaaga, sidaas darteed waxaan halkan ku soo koobayaa sawirka sawirka. Fadlan tixraac maqaallada soo socda ee ku saabsan Biei iyo Furano. Dhulka quruxda badan xagaaga ee Qorrax-soo-baxa ee Biei, Hokkaido, Japan = Adobestock Ubax qurux badan beer midab leh oo ku taal Biei, Hokkaido, japan = Shutterstock African Marigold, Salvia waxay ubaxaysaa khadadka qaanso roobaadka ee caanka ah ee quruxda badan Panoramic Gardens Shikisai-no-oka ee Hokkaido , Japan = Shutterstock Lavendar, ubax guduudan oo ubaxa Sunrise Park, Furano, Hokkaido, Japan = Shutterstock Haweeney taagan Lavender Field ee Tomita Farm, Furano, Hokkaido, Japan = Shutterstock Muuqaalo kale oo weyn oo ku yaal Biei iyo Furano Buur qurux badan oo Biei- Cho, Hokkaido = Adobe Stock Ken & Mary geed, meel caan ah oo ku taal Biei-cho, Hokkaido Japan = Shutterstock Sunflower ubax ee Hokusei no Oka Tenbo Park ee Hokkaido, Japan = Shutterstock balli buluug ah oo bieishirogane magaalada = Shutterstock balli buluug ah oo bieishirogane ah = Habeenka AdobeStock ee muuqaalka fiidkii ee Hokkaido. Biei Hokkaido, Japan = Shutterstock qorrax dhaca Biei, Hokkaido, Japan = Shutterstock Qorrax-dhac qurux badan gudaha Biei, Hokkaido, Japan = Shutterstock Maps Biei [map address="Biei, Hokkaido" width="100%" height="300px" api=" AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="8" jiido = " run" controls = " run "] Furano [map address = "Furano, Hokkaido" . ..
Sawirro: Geisha (Maiko & Geigi) oo ku sugan Gion, Kyoto
Japan weli waxay leedahay dhaqan "geisha". Geisha waa haween si kal iyo laab ah ugu maaweeliya martidooda dhaanto iyo heeso Jabbaan ah. Geisha gabi ahaanba way ka duwan tahay xushmadda "Oiran" ee jirtay xilligii Edo. Kyoto, geisha waxaa loo yaqaan "geigi". Geisha da'da yar ee baratabarka ah waxaa loo yaqaan "maiko". Dhowaan, haweenka u shaqeeyay shirkadda waxaa laga yaabaa inay noqdaan geisha. Hadda ka hor, geisha dhawr jeer baan waraystay. Waxay barteen caqli badan iyo asluub ​​jilicsan waxayna yihiin dhaxal-gal qiimo leh oo dhaqanka soo jireenka ah. Kyoto, munaasabadaha waxaa lagu qabtaa gu'ga iyo deyrta halkaasoo aad ka daawan karto qoob ka ciyaarka geisha. Geisha sidoo kale waxay qayb firfircoon ka ciyaartaa Bandhigga Gion ee Juulaay. Fadlan isku day dhaqanka geisha! Sawirrada Gion ee Gion = Shutterstock Sawirrada Gion = Shutterstock Sawirrada Gion = Shutterstock Sawirrada Gion = Shutterstock Sawirrada Gion. Gion [map address="Gion, Kyoto" width="100%" height="300px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="12 "la jiidi karo = " run " controls = " run "] Waan ku mahadsan yahay inaad akhrido ilaa dhammaadka. Ku noqo"Best of Kyoto" Qoraallada la xiriira: Sawirrada: Kyoto Imperial Palace (Kyoto Gosho) Sawirrada: Kyoto dhaqameed ee Sawirrada xagaaga: Macbadka Kodaiji ee Kyoto Sawirrada: Ubaxa Cherry ee Kyoto Sawirrada: Macbadka Kiyomizudera ee Kyoto Sawirrada: Kamogawa River ee Kyoto Sawirrada: Nanzenji Temple ee Kyoto Sawirrada Bandhiga Jidai Matsuri ee Kyoto Sawirrada: Iftiinka cajiibka ah "Hanatouro" ee Arashiyama, Kyoto Sawirrada: ...
Sawirro: Kinkakuji vs Ginkakuji -Waxkee ayaad ugu jeceshahay?
Keebaa ka fiican, Kinkakuji ama Ginkakuji? Boggaan, aan ku baro sawirada quruxda badan ee labadan macbad ee matalaya Kyoto. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Kinkakuji iyo Ginkakuji, fadlan eeg maqaallada hoose. Sawirada Macbadka Kinkakuji iyo Ginkakuji ee Kyoto, Japan = Shutterstock Kinkakuji Temple ee Kyoto, Japan = Shutterstock Ginkakuji Temple ee Kyoto, Japan = Shutterstock Ginkakuji Temple ee Kyoto, Japan Japan = Shutterstock Kinkakuji Temple ee Kyoto, Japan = Shutterstock Ginkakuji Temple ee Kyoto, Japan = Macbadka AdobeStock Kinkakuji ee Kyoto, Japan = Khariidadda Shutterstock ee Kinkakuji [map address="Kinkakuji" width="100%" height="300px" api= "AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="12" jiidaya = " run" controls = " run ah "] Khariidadda Ginkakuji [map address = "Ginkakuji" width ="100%" height="300px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="12" jiidaya = " run" controls=" run" ] Waan ku faraxsanahay inaad akhriday ilaa dhamaadka. Ku noqo"Best of Kyoto"Mowduucyada la xiriira: Sawirrada: Macbadka Kodaiji ee Kyoto Sawirada: Wadooyinka buuraha ee taariikhiga ah ee Kyoto -Sannei-zaka, Ninei-zaka, iwm. Sawirada: Jidai Matsuri Festival ee Kyoto Sawirada: Ubaxyada Cherry ee Kyoto Sawirada: Kyoto Imperial Palace (Kyoto Gosho) Sawirada: Kifune, Kurama, Ohara xilliga jiilaalka -Ku wareega agagaarka waqooyiga Kyoto Kyoto! Sawirada Kyoto: Dhaqanka Kyoto ee Sawirada Xagaaga: Tuulooyinka Jiilaalka lagu qariyay ee Japan Sawirada: Koyasan
Hakodate ee koonfurta Hokkaido waxa qariyay baraf laga bilaabo Jannaayo ilaa March.Hakodate wakhtigan runtii waa qurux. Aan u qaadno safar macmal ah Hakodate! Fadlan tixraac maqaalka soo socda faahfaahinta. Sawirada Habeenka Hakodate ee Mt. Hakodate = Shutterstock Muuqaalka Jiilaalka ee Buur Hakodate = Shutterstock Mt Hakodate Port Winter Kanemori Aka Renga Soko in Hakodate = Shutterstock Hokodate Subaxdii Subaxdii oo u dhow Hakodate Station Hilibka cuntada badda ee suuqa subaxii skiing iyo barafka fuulista ee Beerta Onuma ee agagaarka Hakodate = Shutterstock Map of Hakodate [map address="Hokodate" width="100%" height="500px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="disclight" -border-map dp-map-centered" zoom="8" jiidaya = " run " controls = " run "] Waan ku qanacsanahay inaad akhridodhamaad Ku laabo "Best of Hakodate" Qoraallada la xidhiidha: Hakodate! 7 Soo jiidashada Dalxiiska ee ugu Fiican iyo Waxyaabaha la sameeyo Sawirrada: Biei iyo Furano xagaaga Sawirro: buundada Taushubetsu ee Hokkaido Sawirrada: Tomamu ee Hokkaido Sawirrada: Fardaha Hokkaido Sawirrada: Kaymaha quruxda badan ee Tokachi, Hokkaido Sawirrada: Noboribetsu Onsen -Hokkaido Sawirrada dalxiiska guga kulul ee ugu weyn Sawirrada Yokohama: Sawirrada Koyasan: Tuulooyinka uu barafku daboolay ee Japan Sawirrada: Quruxda Okinawa ...
Sawirada: Khadka Tadami ee Fukushima
Haddii aad rabto inaad ku raaxaysato muuqaalka quruxda badan ee baadiyaha Japan ee tareenka, waxaan ku talinayaa khadka JR Tadami ee galbeedka Fukushima Prefecture. Khadka Tadami wuxuu ka socdaa Aizu-Wakamatsu, oo ah magaalo qadiimi ah halkaas oo aad ka dareemi karto dhaqanka samurai ee Japan, iyada oo loo marayo buuraha. Sawirada Tadami Line JR Tadami Line ee Fukushima = Shutterstock JR Tadami Line ee Fukushima Prefecture = Shutterstock JR Tadami Line ee Fukushima = Pixta JR Tadami Line gudaha Fukushima = Shutterstock JR Tadami Line ee Fukushima = Pixta JR Tadami Line ee Fukushima Prefecture = Khariidadda Shutterstock ee Aizu-Wakamatsu [map address="Aizu-Wakamatsu" width="100%" height="300px " api = "AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme = "discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="7" dragable="true" controls="run"] Waan ku mahad naqayaa inaad akhrido ilaa dhamaadka . Ku noqo"Best of Fukushima"Mowduucyada la xiriira: Sawirrada: Tuulada Ouchijuku ee Gobolka Fukushima Sawirro: Hanamiyama Park oo ku taal Fukushima Gobolka Fukushima! Soojiidashada ugu Fiican iyo Waxyaabaha La Sameeyo Sawirrada: Miharu Takizakura-Geedka cherry ee ugu wanaagsan Japan! Sawirada: Ise Jingu Shrine ee Mie Sawirada Gobolka: Kanazawa oo ku taal Ishikawa Sawirro: Masaajidka Motonosumi ee Yamaguchi Sawirrada: Jasiiradda Gunkanjima ee Gobolka Nagasaki Sawirrada: Masjidka Togakushi ee Gobolka Nagano Sawirada: Dooxada Biwako ee Shiga Sawirrada: Takachiho oo ku taal Miyagaki Sawirrada: Tuulooyinka barafka lagu daboolay ee Japan
Sawirro: Beppu (1) Dalxiis qurux badan oo iftiin leh oo iftiin leh
Beppu, oo ku taal qaybta bari ee Kyushu, waa goob loo tamashle tago guga kulul ee ugu weyn Japan. Markaad booqato Beppu, waxaad marka hore la yaabi doontaa ilo kulul oo halkan iyo halkaas ka soo baxa. Markaad ka eegto muuqaalka magaalada Beppu ee buurta, sida aad ku arki karto boggan, uumiga ayaa kor u kacaya meel kasta. Sinaba dab uma aha. Habeenkii, uumigan ayaa iftiiminaya oo si qurux badan u iftiimaya. Sawirada Khariidadda Beppu ee Beppu [map address="Beppu, Oita" width="100%" height="300px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="discreet" class="dp-light-border-map-map-map-map xuddun u ah" zoom="9" jiidaya = " run" controls = "run"] Waxaan ku qanacsanahay inaad akhrido ilaa dhammaadka. Fadlan arag sawiro kale Dib ugu noqo "Best of Beppu" Aniga ahaan Bon KUROSAWA Waxaan muddo dheer tafatire sare u ahaa Nihon Keizai Shimbun (NIKKEI) oo hadda waxaan u shaqeeyaa qoraa shabakad madax-bannaan. At NIKKEI, waxaan ahaa tifaftiraha guud ee warbaahinta dhaqanka Japan. Aan soo bandhigo waxyaabo badan oo madadaalo iyo xiiso leh oo ku saabsan Japan. Fadlan tixraac maqaalkan faahfaahin dheeraad ah Qoraallada la xidhiidha: Sawirrada: Beppu (4) Ku raaxayso ilo kulul oo noocyo kala duwan leh! Beppu! Ku raaxayso goobta loo dalxiis tago ee guga kulaylka ee ugu weyn! Sawirro: Beppu (3) Aynu booqanno Jahannamo kala duwan (Jigoku) Sawirro: Beppu (2) Isbeddellada quruxda badan ee afarta xilli Sawirrada: Noboribetsu Onsen -Hokkaido goob-joogga ugu weyn ee guga kulaylka ee dhalaalaya guga iyo muuqaalka barafka fog: laga soo bilaabo 10 sawir oo qurux badan! : Hakone -Aagga guga kulul ee lagu taliyay ee u dhow Tokyo Sawirrada: Jiilaalka ee Niseko Ski Resort ee Hokkaido -Ku raaxayso barafka budada ah Sawirrada: Kinosaki Onsen -Kool dhaqameed caan ah ...
Sawirada: Miharu Takizakura –Wax geedka cherry ee ugu wanaagsan Japan!
Haddii aad i waydiin lahayd ubaxa cherry ee ugu quruxda badan Japan, waxaan odhan lahaa Miharu Takizakura ee ku yaala Fukushima Prefecture. Geedka Miharu Takizakura wuxuu ka weyn yahay 1000 sano. Geedkan quruxda badan ee cherry ayaa muddo dheer ilaalinayey oo ay jeclaayeen dadka deegaanka. Aan aado safar macmal ah si aan uga mahadcelino Miharu Takizakura! Sawirada Miharu Takizakura Miharu Takizakura ee Fukushima = Shutterstock Miharu Takizakura ee Fukushima Maamule = Shutterstock Miharu Takizakura oo ku yaal Fukushima Prefecture = Shutterstock Miharu Takizakura ee Fukushima Prefecture = Shutterstock " width="100%" height="500px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="8" jiido=" run" controls= "run"] Waan ku mahadsan yahay inaad akhriday ilaa dhammaadka. Ku noqo"Best of Fukushima" Qoraallada la xidhiidha: Sawirrada: Hanamiyama Park ee Fukushima Sawirrada: 11 ereyada muhiimka ah si aad si buuxda ugu raaxaysato Japanese Cherry Blossoms Sawirrada: Tuulooyinka barafku daboolay ee Japan Sawirrada: Mt. Yoshino -30,000 geed cherry ah ayaa ubaxa guga! Sawirrada: Sawirrada Koyasan: Ise Jingu Shrine gudaha Mie Prefecture Sawirro: Kanazawa ee ismaamulka Ishikawa Sawirrada: San'in -Dhul dahsoon oo ay ku harsan tahay Japan-dii hore!
Sawirro: Takachiho oo ku yaal Miyagaki
Takachiho waa dhul dahsoon oo loo yaqaan hoyga khuraafaadka Japan. Waxay ku taal aagga buuraleyda ah ee ismaamulka Miyazaki ee bariga Kyushu. Magaaladu wali waxa ay haysaa goobihii khuraafaadka ahaa iyo ciyaaraha Kagura ee lala xidhiidhiyay. Waxa kale oo ay caan ku tahay badda quruxda badan ee daruuraha xilliga dayrta. Meesha ugu caansan ee loo dalxiis tago ee magaaladan waa Gorge Takachiho. Aan ku qaadano safar macmal ah Takachiho oo wata sawiro badan! Sawirada Takachiho Takachiho ee ismaamulka Miyagaki = Shutterstock Takachiho oo ku taal Miyagaki Prefecture = ADobeStock Takachiho ee Miyagaki Prefecture gudaha Miyagaki Map of Takachiho [map address="Takachiho, Miyazaki Prefecture" width="100%" height="300px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="discreet" class="dp-map-light-dp -centered" zoom="9" jiidaya = " run" controls = "run"] Waan ku mahadsan yahay inaad akhrido ilaa dhammaadka. Ku laabo "Best of Miyazaki" Qoraallada la xiriira: Sawirrada: Oze ee Gobolka Gunma Sawirrada: Dooxada Biwako ee Shiga Sawirrada: Kanazawa ee ismaamulka Ishikawa Sawirrada: Hanamiyama Park ee Fukushima Sawirrada: Ise Jingu Shrine ee Mie Sawirrada: Jasiiradda Gunkanjima ee Nagasaki Sawirrada Gobolka: Togakushi Shrine oo ku taal ismaamulka Nagano Sawirro: Motonosumi Shrine oo ku yaal ismaamulka Yamaguchi Sawirrada: Tadami Line ee ku taal degmada Fukushima Sawirrada: Shuri Castle
Farriin ka socota tifatiraha:
Waad ku mahadsan tahay booqashada “Best of Japan”! Magacaygu waa Bon Kurosawa ujeediguna waa in la bixiyo macluumaad faa iido leh oo booqdayaasha rajo ka qaba iyo kuwa xiiseynaya Japan. Maqaalkan, sawirrada iyo fiidiyowgu waxay ku siin doonaan dhadhan gaar ah oo Japan. Waxaan rajeynayaa taas inBest of Japan”Waxaad dareemi doontaa inaad ugu dhowdahay Japan oo aad fikrad fiican ka haysatid waxaad filan karto.
Ku raaxayso Japan boggan!
Goobtani waxaa sifiican looga daawan karaa kombiyuutarka. Fiidiyowyada qaar kama ciyaari karaan taleefankaaga casriga. Si kastaba ha noqotee, taleefankaaga casriga waxaad wali heli kartaa qodobbada ku siinaya macluumaadka ugu dambeeyay ee ku saabsan Japan. Xidhiidhada dibedda ee websaydhkan sidoo kale ayaa loo isticmaali karaa waxtarkaaga.
Waxaa jira goobo badan oo soo bandhigaya Japan. In kasta oo boggan hadda uun la bilaabayo waan sii wadi doonaa inaan cusboonaysiisto waxa ku qoran si joogto ah.
Markaad rabto inaad wax ka barato Japan ama aad u baahatid wax xiiso leh inaad akhrido “Best of Japan"Waa ikhtiyaarkaaga ugu fiican!
Bogkee ayaad jeceshahay inaad ka baarto Japan?
Nolosha Japan iyo dhaqanka! kuwada noolaadaan dabeecadda iyo dadka
Halkan laga bilaabo waxaan jeclaan lahaa inaan ku barto nolosha iyo dhaqanka Jabbaan. Waxaan u maleynayaa in erayga muhiimka ah ee lagu fahmayo nolosha iyo dhaqanka Jabbaan uu yahay "Is-waafajin". Sidaa darteed, waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo koobo nolosha iyo dhaqanka reer Japan aragtidan "wada noolaanshaha" ee boggan. "Harmony" oo ku saleysan nolosha iyo dhaqanka reer Japan Sawirkee ayaad ka haysaa Japan? Dadka qaarkiis, Japan waxay umuuqataa wadan aad u adag in la fahmo. Japan waxay noqon kartaa "Galapagos" macno ahaan. Dal jasiirad ah oo ka fog qaaradda, waxaa lagu barbaariyay nolol iyo dhaqan u gaar ah. Kadib markay yimaadeen Japan, dad badan ayaa layaaban nolosha iyo dhaqanka u horumarey sida Galapagos. In kasta oo magaalooyin waawayn sida Tokyo iyo Osaka horumaraan, haddana dabeecadda hodanka ah ee afarta xilli ayaa soo dhawaynaysa booqdayaasha. Dhaqammada sida mowlaca, sumo iyo kabuki wali wey sii jiraan, laakiin dhaqamada cusub sida animation, cosplay, robots, iwm ayaa midba midka kale u dhasha. Waddan ay waxyaalaha is diidan oo dhami isku mid yihiin. Taasi waa Japan. Haddii aad gujiso sawirka hoose, waxaa laguu keeni doonaa adduunka iswaafajinta dahsoon ee Japan. Waxaan diyaariyey bogag kala duwan, markaa fadlan booqo bogag badan oo baashaal. Iswaafajinta Dabeecadda Dabeecadda Dadka Dhaqanka Casriga Casriga ah Fiidiyowyada lagu taliyay ee soo bandhigaya nolosha iyo dhaqanka Jabbaan waan ku faraxsanahay inaad aqrinayso ilaa dhammaadka Ku noqoshada guriga Aniga igu saabsan Bon KUROSAWA Waxaan in badan ka soo shaqeeyay sidii tifaftire sare Nihon Keizai Shimbun (NIKKEI) waxaanan hada u shaqeeyaa sidii qoraa web madax banaan. NIKKEI, waxaan ahaa ...
20 Waxyaabaha ugu fiican ee lagu sameeyo Japan iyo sida loo sameeyo kaydinta
Waxaa jira waxyaabo badan oo aad ku raaxeysan karto safarkaaga Japan. Dhexdooda, waxyaabaha noocee ah ayaad damacsan tahay inaad ku dhisto qorshahaaga safarka? Boggan, waxaan ku soo qoray waxa aad ku raaxeysan karto Japan. Fadlan dhagsii sawirka sheyga aad xiiseyneyso oo hel macluumaad faahfaahsan. Macluumaadka aasaasiga ah ee tikidhada tikidhada iyo dalxiisyada ajnebiga ah ee dalxiis aan la aqoonsan oo xiran kimono, dharka dhaqanka qaranka ee Japan ee ku socda macbadka Sensoji macbudka caanka ah ee Tokyo, Japan = shutterstock Ka hor intaadan sharxin waxa aad ku raaxeysan karto Japan, fadlan la soco hal macluumaad aasaasi ah oo la sameeyo safarkaaga cajiib. Taasi waxay ku saabsan tahay sida loo dalbado tikidhada iyo dalxiisyada kala duwan. Waxaan ku soo bandhigayaa qodobkan qodobka soo socda, markaa fadlan iska xaadir haddii aad xiiseyneyso. 20 Waxyaabaha ugu fiican ee aad ugu raaxeysan karto safarkaaga Japan Kadib, hoosta, waxaan ku taxan doonaa 20ka shay ee aan kugula taliyo. Haddii aad gujiso sawir kasta, waxaad u guuri kartaa maqaalka u dhigma. Cuntooyinka Jabbaan Cuntooyinka Goobaha Barafka laga Gooyo Cherry Blossoms Ubaxa Laba gabdhood oo da 'yar oo Jabaan ah ayaa ku fadhiistay sagxad rooga casaanka ah si ay u arkaan una raaxaystaan ​​Beerta Jaban ee caleenta midabada leh ee ku taal macbadka Enkoji, Kyoto, Japan. Halkan waxaa ku yaal Rinzai Zen Sect oo aad caan u ah xilliga dayrta = shutterstock Dayrta Caleemaha Jardiinooyinka Japan Onsen (Guga Kulul) Xayawaanka iyo kalluunka Hiking Cosplayer sida jilayaasha Japan cosplay iid .Cosplayers inta badan waxay la falgalaan abuurista dhaqan hoose, iyo adeegsiga ballaaran ee ereyga " cosplay ", Osaka, Japan = shutterstock Jardiinooyinka Madadaalada iyo Ciidaha Parks Festivals ...
Meelaha Dalxiiska ee ugu Fiican Japan! qaboobaha, guga, xagaaga, deyrta
Boggan, waxaan ku leeyahay bogag si shaqsi ah loogu soo bandhigo qaybaha kala duwan ee Japan. Waad tagi kartaa boggaga adoo daawanaya liiska waxaadna gujineysaa cinwaannada aad xiiseyneyso. Sikastaba, waxaan ku taxay bogaggan hoose. Fiiri waxyaabaha soo socda oo haddii uu jiro bog aad xiiseyneyso, fadlan dhagsii oo aad tag boggaas. Sababtoo ah Japan waa waddan aad u ballaaran oo woqooyiga iyo koonfurta ah, Hokkaido oo woqooyiga ah iyo Kyushu iyo Okinawa oo koonfurta ah ayaa aad uga duwan. Waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontid Jabbaan aad jeceshahay boggeyga. 10 Goobaha Socdaalka ee ugu Fiican: Halkee ayaad jeceshahay inaad aado? Haddii aad rabto inaad dulmar ku sameyso nooca dhibco indha indheynta ah ee ku yaal Japan, fadlan akhri bogga soo socda. Meelaha ugufiican marka loo safrayo Japan Meelaha ugu caansan ee Japan waa kuwan soo socda. Fiiri sawirada is riix oo guji meel kasta oo aad xiiseyneyso. Kuwa soo socda waa maqaallo la xiriira gobol ahaan. Hokkaido Lagu Taliyay Goobaha Sapporo Hakodate Furano / Biei Tohoku (Waqooyiga bari ee Honshu) Meelaha lagu taliyay ee Sendai (Miyagi Prefecture) Towada, Oirase (Aomori Prefecture) Aizuwakamatsu (Fukushima prefecture) Gobolka Kanto (agagaarka Tokyo fect Recommureure) (Kanagawa Prefecture) Gobolka Chubu (Bartamaha Honshu) Meelaha lagu taliyay in la tago Mt. Fuji (Yamanashi, Shizuoka Prefecture) Shirakawago (Gifu Prefecture) Kanazawa (Ishikawa Prefecture) Kansai (Qiyaastii Kyoto iyo Osaka) Meelaha lagu taliyay Kyoto (Kyoto Prefecture) Nara (Nara Prefecture) ) Osaka (Gobolka Osaka) Gobolka Chugoku (Galbeedka Honshu) Meelaha lagu taliyay ee Hiroshima (Gobolka Hiroshima) Miyajima (Gobolka Hiroshima) Matsue (Shimane ...
Sidee loo Diiwaangeliyaa Deganaanshaha Japan!
Waxaa jira dad leh hiwaayado kala duwan oo la yaab leh. Xaqiiqdii, waan jeclahay isbarbar dhiga goobaha boos celinta hudheelka. Markii aan qorto hoteel, waxaan ku hubiyaa bogag badan oo ballansasho ah waxaanan ku xajiyaa goobta aan aad ugu qancay. Aniga ahaan hiwaayad noocan oo kale ah, waxaan dareemayaa inay jiraan dalxiisayaal adeegsanaya goobo boos celis ah oo aanan ku talin karin wax badan. Sidaa darteed, waxaan soo bandhigi doonaa waxyaabaha ku saabsan boos celinta hoteelka oo lagu taliyay in qof walba la sameeyo iyada oo la sameeyo degel ka duwan "Best of JapanBogaggaan, waxaan ku soo bandhigi doonaa qaar ka mid ah rugaha boos celinta ee hudheellada aan kugula talinayo. Faahfaahin ku saabsan hoyga Japan sida hudheel, Ryokan, Minshuku fadlan fiiri qodobka soo socda. Guji masawir kasta, goobta ballansigu wuxuu noqon doonaa Waxaa lagu muujiyey bog kale 2 Goobaha Isbarbar-dhigga Ugu Fiican ee Ka-Talinta Hoyga Jabaan Waxaa runtii jira goobo badan oo aad ballan ka qabsan karto hoteel ama Ryokan oo ku yaal Japan. Inta badan Suuragal ma ahan inaad aragto dhammaantood .. Marka, waxa ugu horreeya ee aan jeclaan lahaa inaan kugula taliyo waa 'goobo isbarbar dhig' halkaasoo aad ku barbardhigi karto qorshooyinka hoyga ee hoteelo badan oo boos celis ah TripAdvisor TripAdvisor Haddii aad rabto inaad raadsato hoy kugu habboon magaalooyinka qaar sida Tokyo ama Kyoto, waxaan kugula talinayaa inaad marka hore ka baarto TripAdvisor. Waa goob isbarbardhig oo aad caan u ah. Boggan wuxuu leeyahay laba faa'iidadood Marka hore, adoo adeegsanaya TripAdvisor, waxaad soo uruurin kartaa macluumaad ku saabsan hoteelada aadka loo qiimeeyo iyo magaalada aad ku tegi doonto. Marka labaad, waxaad ka heli kartaa hoy rakhiis qorshaha odjo ...
Gaadiidka Japan! Jidka Tareenka ee Jabaan, Shinkansen, Madaarada iwm.
Markaad u safreyso Japan waxaad ugu dhaqaaqi kartaa si hufan adoo isku daraya shinkansen (Tareenka Rasaasta), diyaaradda, baska, tagaasida, kirada baabuurta iwm. Haddii aad raacisid safarka Shinkansen ee safarkaaga, waxay noqon doontaa xusuus wacan. Xaaladdaas oo kale, iibsashada "Japan Rail Pass" waxay noqoneysaa mid macquul ah. Boggan, waxaan ku soo bandhigi doonaa muuqaalka guud ee iyaga. Boggan waa mid aad u dheer. Haddii aad gujiso badhanka "show" shay kasta, waxyaabaha ku qarsoon oo faahfaahsan ayaa la soo bandhigi doonaa. fadlan ka faa'iideyso jadwalka waxyaabaha ku jira. Waxaad ku noqon kartaa dhanka kore adigoo riixaya badhanka falaarta ee ku taal midigta hoose ee boggan. Japan Rail Pass bogga rasmiga ah ee "Japan Rail Pass". Guji oo waxaa lagu soo bandhigi doonaa bog gooni ah Gujinaya sawirka wuxuu ka muuqanayaa khariidadan bogga rasmiga ah ee Japan Rail Pass bog gaar ah oo ku saabsan Haddii aad qorsheyneyso inaad ku dhex safarto Japan adoo isticmaalaya tareenada JR sida Shinkansen, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad iibsato "Japan Rail Pass" ka hor bixitaanka Japan Rail Pass (oo sidoo kale loo yaqaan JR Pass) waa marin tareen oo aad u qiimo badan oo JR ay siiso dalxiisayaasha ajnabiga ah. Wax badan ayaad ku raaci kartaa JR 's Shinkansen iyo xawaaraha caadiga ah iwm. Qiimaha Jidka Tareenka Japan waa, tusaale ahaan, 33,000 yen qofkiiba (7 maalmood, Nooca baabuurta caadiga ah). Japan gudaheeda, waxay ku qaadataa qiyaastii 28,000 yen qofkiiba inuu dib iyo gadaal ugu laabto inta udhaxeysa Tokyo iyo Osaka ee Shinkansen. Haddii aad isticmaasho waxyaabo badan oo JR ah, Jidka Tareenka ee Japan wuxuu kuu noqonayaa "saaxiib" aad u xoog badan. Hoos waxaa ku yaal ...
Maqaallada lagu taliyay / diyaarinta
Aan u soo bandhigo qaar ka mid ah maqaallada boggan.
Waxaa jira dad leh hiwaayado kala duwan oo la yaab leh. Xaqiiqdii, waan jeclahay isbarbar dhiga goobaha boos celinta hudheelka. Markii aan qorto hoteel, waxaan ku hubiyaa bogag badan oo ballansasho ah waxaanan ku xajiyaa goobta aan aad ugu qancay. Aniga ahaan hiwaayad noocan oo kale ah, waxaan dareemayaa inay jiraan dalxiisayaal ...
Sida loo sameeyo oo loo iibsado tigidhada iyo dalxiisyada Japan! Sumo, Baseball, Concert, nashaadaadyada ...
Haddii aadan ka qeybgalin safar ay la shaqeyso koox weyn oo aad si xor ah ula safarto asxaabtaada ama qoyskaaga Japan, sideed u sameysan kartaa oo aad u iibsan kartaa tikidhada tartamada isboorti iyo riwaayadaha. Ama sidee ayaad u dalbatataa dalxiisyada sida nashaadyada? Waxaa jira goobo ballansasho ...
Markaad ku safraysid Japan waxaad udhaqaaqi kartaa si hufan adoo isku daraya shinkansen (Tareenka Bullet), diyaaradda, baska, tagsi, kiraynta baabuurta iwm. Haddii aad ku darto safarka Shinkansen safarkaaga, waxay noqon doontaa xasuus wacan. Xaaladaas, iibsashada "Japan Rail Pass" waxay noqon laheyd mid macquul ah. Boggan, waxaan ...
Maqaallada lagu taliyay / Goobaha
Boggan, waxaan hayaa bogag ay ku bandhigayaan shaqsiyan qaybo kala duwan oo Japan ah. Waad u tagi kartaa bogagga adoo daawanaya menu-ga waxaadna gujineysaa ciwaannada aad xiiseyneyso. Si kastaba ha noqotee, waxaan kuqoray bogaggaan hoose. Fiiri waxyaabaha soo socda iyo haddii uu jiro bog ka mid ah ...
Waxyaabaha ugufiican ee Tokyo laga sameeyo: Asakusa, Ginza, Shinjuku, Shibuya, Disney iwm.
Tokyo waa caasimada Japan. In kasta oo dhaqanka soo jireenka ahi wali yahay, hal-abuurka casriga ahi si joogto ah ayuu u dhacayaa. Fadlan kaalay oo booqo Tokyo oo aad dareento tamar. Boggan, waxaan ku soo bandhigi doonaa meelaha dalxiiska iyo meelaha lagu daawado gaar ahaan kuwa caan ku ah Tokyo. Boggan aad ayuu u dheer yahay. Hadaad akhrido boggan, ...
Kyoto! 26 Soojiidashada ugu Fiican: Fushimi Inari, Kiyomizudera, Kinkakuji iwm.
Kyoto waa magaalo qurux badan oo dhaxalsiisa dhaqanka reer Japan. Haddii aad aado Kyoto, waxaad ku raaxeysan kartaa dhaqanka dhaqameed ee Jabbaan ilaa waxa qalbigaagu ka kooban yahay. Boggan, waxaan ku soo bandhigi doonaa jiidashada dalxiiska ee si gaar ah loogu taliyay Kyoto. Boggan wuu dheer yahay, laakiin haddii aad boggan u akhrido ...
Maqaallada lagu taliyay / Xiisaha
Waxaa jira waxyaabo badan oo aad ku raaxeysan karto safarkaaga Japan. Dhexdooda, noocee ah waxyaabaha aad damacsan tahay inaad ku dhisto qorshaha safarkaaga? Boggan, waxaan ku soo koobay waxaad ku raaxeysan karto Japan. Fadlan dhagsii sawirka sheyga aad xiiseyneyso iyo ...
12 Meelaha ugu Fiican Barafka Jabaan: Shirakawago, Jigokudani, Niseko, Bandhig baraf Sapporo ...
Boggan, waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo bandhigo muuqaallada barafka ee Japan. Japan waxaa ku yaal aagag badan oo baraf leh, sidaa daraadeed way adagtahay in la go'aamiyo meelaha ugu wanaagsan ee Barafka Barafka. Boggan, waxaan ku soo koobay meelaha ugu wanaagsan, badiyaa meelaha caan ku ah dalxiisayaasha shisheeyaha ah. Waan la wadaagi doonaa ...
Noocyada ubaxyada Ubax ee ugu Fiican ugxan iyo Jiilaal! Hirosaki Castle, Mt.Yoshino ...
Boggan, waxaan ku soo bandhigi doonaa baro indho-indheyn leh ubaxyo qurux badan. Sababtoo ah dadka reer Japan ayaa halkan iyo halkaas ku beeray ubaxyo cherry ah, way adag tahay in la go'aansado aagga ugu fiican. Boggan, waxaan kugu soo bandhigi doonaa aagagga ay safrayaasha ka imanaya waddamada shisheeye ay ku raaxeysan karaan shucuurta Japan oo ay ku jiraan ubaxyo cherry ah. ...
11 macluumaad aasaasi ah oo ay tahay inaad ogaato kahor intaadan safrin Japan
Hal-abuurka Jaban ee ka muuqda muuqaalka boggan ayaa hubaal kuu soo gudbin doona macluumaad faa'iido leh!
Goormaa ugu fiican ee la booqdaa Japan?
Goorma ayey tahay waqtiga ugu wanaagsan sanadka ee safarka Japan? Jawaabtu waxay kuxirantahay ujeedadaada safarka. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad aragto ubaxa cherry ee caanka ah Japan? Hadday sidaas tahay, waxaan kugula talinayaa inaad timaado Japan inta lagu jiro bisha Abriil. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad aragto muuqaal qurxoon baraf leh? Isku day inaad booqato Hokkaido, Tohoku ama Nagano laga bilaabo Janaayo ilaa Febraayo. Haddii aad rabto inaad ku raaxaysato caleemaha deyrta, qiyaastii Nofeembar ayaa ugu fiican. Haddii aad arki doontid caleemaha xilliga dayrta ee Hokkaido, qiyaastii Oktoobar ayaa ugu fiican. Maqaalkani wuxuu iftiiminayaa xilli kasta astaamaha ugu cajiibka badan. Guga - Maarso, Abriil, Maajo: Xilliga ubaxyada quruxda badan Mt. Fuji, Japan = Adobe Stock Nemophila oo ku taal Hitachi Seaside Park, Ibaraki, Japan Waqtiga gu'ga ee Japan waa inta lagu jiro bilaha Maarso, Abriil iyo Maajo. 3-dii usbuuc ee ugu dambeeyay bisha Maarso iyo sidoo kale 3-da toddobaad ee ugu horeeya bisha Abriil waa waqtiyo ku habboon safarka Guga. Ardaydu way dhammeynayaan sanad dugsiyeedka dadka waaweyn ee shaqeeyana wali shaqadooda ayey ku jiraan. Sannad dugsiyeedka Jabbaan wuxuu bilaabmaa Abriil wuxuuna dhammaadaa sanadka soo socda ee Maarso. Ubaxyada Cherry-ga waxay caadi ahaan ubaxaan inta lagu jiro labada toddobaad ee u dhexeeya sannad dugsiyeedka. Waxay kuxirantahay meesha aad aadeyso Japan, waxaad had iyo jeer awoodi doontaa inaad hesho xaflad ubaxeed cherry ah si aad ugaqeyb gasho. Cimilada gu'ga ayaa aad ufiican maalintii laakiin habeenadu waxay u egtahay inay wali yara qabow yihiin Xagaaga - Juun, Julaay, Ogast: Hokkaido iyo ciidaha xagaaga waxaa lagula talinayaa beerta ubaxa Midabada leh iyo cirka buluuga ah ee Shikisai-no-oka, Biei, Hokkaido, .. .
Af! 3 waxyaabood oo ay tahay in la xasuusto markii lala hadlayo dadka reer Japan
Dad badan oo reer Japan ah kuma fiicna isticmaalka Ingiriisiga. Sababtaas awgeed, dadka imanaya Japan si wanaagsan umala xiriiri karaan dadka reer Japan. Ajaanibta ayaa mararka qaar isweydiiya sida ay cid uga codsadaan caawimaad markay lumiyaan ama ay u baahdaan macluumaad. Markay aadayaan magaalo yar ama tuulo yar si fudud umuula xiriiri karaan dadka makhaayada ama xitaa hudheel. Japan gudaheeda, Maxaad sameyn kartaa si aad ula xiriirto dadka ku nool Japan? Waxaan kugula talinayaa sadexda arimood ee soo socda. Aynu nidhaahno "Sumimasen" Marka ugu horraysa ee aad lahadasho qof Japanese ah oo aadan aqoon, waa inaad marka hore isticmaashaa weedha soo socota ee Jabbaan. "Sumimasen" Tani waxay leedahay macno la mid ah "Iga raali ahow" ama "Waan ka xumahay (inaan ku dhibaateeyo)" Ingiriisi. Jabaaniis ahaan, weedhan waxaa badanaa loo adeegsadaa. "Sumimasen" sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa "mahadsanid" ama waxaa loogu yeeri karaa caawimaad dukaan ama makhaayad. Weedhani waa mid aad waxtar u leh markaad rabto inaad qof soo jiidato. Guud ahaan, dadka ka soo jeeda Japan kuma fiicna ku hadalka Ingiriiska. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ku dhahdo "Sumimasen" qof Jabaaniis ah way joojinayaan oo dhageysanayaan waxa aad leedahay. Dadka reer Japan waa dad naxariis leh oo soo dhoweynaya dadka ajnabiga ah fadlan si xor ah u isticmaal "Sumimasen" haddii aad caawimaad u baahan tahay. Ha ilaawin inaad uga mahadceliso qof dhageysiga sidoo kale. Ha welwelin. Dadka reer Japan waxay fahmayaan sida loogu yiraahdo "Mahadsanid" Ingiriisiga sidaa darteed way fahmi doonaan mahadnaqaaga. Waraaqo kuqor warqad Jabbaanku way xishoodaan, laakiin markaad dhibaato kujirto, waanu kaa caawin doonaa. = Shutterstock ...
Lacagta Jabbaan Sida loo beddelo lacagta iyo sida loo bixiyo
Lacagta laga helo Japan waa Yen. Boggan wuxuu leeyahay kii ugu dambeeyay ee sarrifka sidaas darteed fadlan halkan tixraac intaadan lacag beddelin. Halkan waxaad sidoo kale ka heli doontaa macluumaad ku saabsan biilasha Japan iyo qadaadiicda. Intaa waxaa dheer, waxaan kuu sharxi doonaa xaaladda hadda jirta ee ku saabsan adeegsiga kaararka deynta ee Japan. Liiska heerka sarrifka: Boqortooyada Japan / USD, iwm. Immisa ayey ku jirtaa 1 yen lacagta waddankaaga? Waxaa laga soo xigtey: www.exchange-rates.org Qoraallada bangiga Jabbaan iyo qadaadiicda Dhibcaha Lacagta ee Japan = Adobe Stock Waxaa jira afar nooc oo waraaqo ah oo Japan ah. Ogeysiiska aad u badan tahay inaad isticmaali doontid wuxuu heystaa qiimaha 1000 yen. 10,000 yen 5,000 yen 2,000 yen 1,000 yen Qadaadiic Japan ah = Adobe Stock Waxaa jira afar nooc oo shilimaad ah gudaha Japan. Filo inaad isticmaasho lacagta 100 yen iyo 10 yen inta badan. 500 yen 100 yen 50 yen 10 yen 5 yen 1 yen yen fiidiyeyaal lagugula taliyay oo laxiriira lacagta Japan Lacag Bixinta Jabbaan Points Weli waxaa jira dukaamo badan oo qaata lacag kaash oo keliya Dalka Japan, waxaa jira dukaanno badan oo qaata kaliya lacag. Inta badan hudheelada, dukaamada waaweyn, dukaamada waaweyn, dukaamada ku habboon waxaad isticmaali kartaa kaararka deynta haddii aad ku safreyso magaalada. Xitaa tagaasida qaarkood waxay u yimaadeen inay aqbalaan kaararka deynta dhowaan. Mashiinno badan oo iibiya oo iibsada tikidhada tareenka ayaa isticmaali kara kaararka deynta. Si kastaba ha noqotee, haddii aad bixiso khidmadda gelitaanka macbudka ama macbudka, waa inaad haysataa lacag kaash ah oo si fudud lagu heli karo. Ku sarif lacagtaada garoonka diyaaradaha Japan gudaheeda, dukaamo aad u yar ayaa qaata lacag kaash ah oo aan ahayn Japanese yen. Sidaa darteed, ...
Goobaha waxtarka leh ee lagula taliyay markaad u diyaar garoobeysid safarkaaga Japan
Boggan, waxaan ku soo bandhigi doonaa degello internet oo kala duwan oo la xiriira Japan. Waan cusbooneysiin doonaa macluumaadkan waqti ka waqti. Waxay kuu noqon laheyd ilo waxtar kuu leh inaad u adeegsato aruurinta macluumaadka. Hoteellada, gaadiidka, maqaayadaha, iyo degellada internetka la xiriira waxaa si faahfaahsan loogu soo koobay qaybo. Maaddaama ay jiraan xiriiriyayaal xagga hoose ee boggan, fadlan tag bogga aad rabto inaad ka aragto halkaas. Goobaha si baaxad leh wax uga barta Jabbaan Dalxiiska Qaranka Japan Jabbaan National Organisation Organisation (JNTO) waa daaqad la xiriirta dalxiiska ee dowladda Japan. Websaydhka rasmiga ah ee JNTO waxaa ku jira macluumaad badan oo indha indheyn ah oo loogu talagalay Japan. Macluumaadkani wuxuu ku qoran yahay 15 luqadood. Haddii masiibooyin waaweyn ka dhacaan Japan, degelkan rasmiga ah wuxuu ku siin doonaa macluumaad lagama maarmaanka u ah dalxiisayaasha ajnabiga ah. >> Websaydhka rasmiga ah ee JNTO halkan waa japan-guide.com japan-guide.com waa degel caan ah oo ay ka shaqeeyaan shisheeyaha ku nool Japan. Waxay si tartiib tartiib ah u kordhisay tirada maqaallada tan iyo markii shabakada la sameeyay. Waa la dhihi karaa waa goobta macluumaadka dalxiis ee inta badan laga yaqaan dalxiisayaasha imanaya Japan hadda. Guga, waxay bixisaa macluumaad ku saabsan ubaxyada ubaxa cherry ee Japan. >> Websaydhada rasmiga ah ee japan-guide.com waa halkaan ZEKKEI Japan ZEKKEI Japan waa websaydh macluumaad dalxiis oo ay maamusho shirkad xafiis weyn ku leh Ginza, Tokyo. Waxay bixisaa maqaallo adeegsada sawirro qurux badan si ay qurbaha ugu soo bandhigaan quruxda Japan. "ZEKKEI" macnaheedu waa "muuqaalka ugu quruxda badan" ee Jabbaan. Sida macnaha magaceeda, waa ...
Kaadhka SIM Card iyo Kireynta Wi-Fi ee Japan! Xagee laga iibsadaa oo lagu kireeyaa?
Intaad ku nooshahay Japan, waxaad ubaahan kartaa inaad isticmaasho taleefanka casriga ah. Sideed mid u heli kartaa? Waxaa jira lix doorasho oo suurtagal ah. Marka hore, waad ku adeegsan kartaa adeegga wareejinta qorshahaaga hadda laakiin fadlan ka hubso adeeg bixiyahaaga qiimeyaasha. Marka labaad, waad ka faa iidaysan kartaa Wi-Fi oo bilaash ah taleefankaaga casriga ah markaad ku safraysid Japan. Marka ku xigta waad iska qori kartaa adeegga Wi-Fi. Waxa kale oo aad adeegsan kartaa kaar SIM horay loo sii diyaariyey oo awood u leh inuu ku adeego Japan dhexdeeda taleefankaaga gacanta laga furo. Waxaad ka adeegsan kartaa adeegga kirada wadankaaga ama Jabaan si aad u hesho Wi-Fi router, kaarka SIM, ama taleefanka casriga ah. Ugu dambeyntiina, waxaa suuragal ah inaad hoygaaga ka kireysato taleefan caqli badan. Hoos waxaa ku yaal macluumaadka ku saabsan xulashooyinkaan oo dhan si ay kaaga caawiyaan inaad go'aan gaarto. Waa maxay doorashada ugu fiican ee isticmaalkaaga? Mashiinka wax lagu iibiyo ee Kaarka madaarka ee Kansai ee Osaka Japan Macluumaadka lagama maarmaanka u ah xulashada aaladda safarkaaga waa sida soo socota. Adeegyada Duulista Hawada oo Dhawaanahan, adeegyada wareega ee loo adeegsan karo si jaban ee dalal shisheeye ayaa kor u sii kacayay. Haddii ay jiraan adeegyo duulimaad oo la awoodi karo oo loo maro bixiyehaaga hadda ka dib ka fiirso adeegso. Jeegaanta Wi-Fi Router Haddii aad la safarto qoyskaaga ama asxaabtaada, waxaa ugu wanaagsan in aad adeegsato router Wi-Fi ah jeebka. Hal Wi-Fi router kooxdaada waxay ku isticmaali karaan internetka wax kabadan hal taleefanka hal mar. Haddii aad leedahay laba ama in kabadan oo Wi-Fi-router ah way kuu fududaan tahay inaad xiriir la yeelatid midba midka kale markaad kala qeybsan tahay ...
Waqtiga Japan hadda! Farqiga waqtiga ee wadankaaga
Waxaa jira hal aag waqti keliya oo Japan ah. Tokyo, Osaka, Kyoto, Hokkaido, Sendai, Nagano, Hiroshima, Fukuoka, Kumamoto iyo Okinawa intuba waa isku waqti. Intaas waxaa sii dheer, maadaama aysan jirin waqti badbaadin maalinlaha ah Japan, dhib kuguma aha inaad ogaato waqtiga Japan. Jabbaan hadda waa waqtiga ugu hooseeya (Haddii waqtiga aan la muujin, calaamadda ku dheji qaybta Jabbaan khariidada). Fadlan tixraac waqtiga kor ku xusan isla markaana hubi waqtiga ay ku kala duwan yihiin aagga aad ku nooshahay. Haddii waddanku dheer yahay bariga iyo galbeedka, waxaa jira dhowr aagag waqti oo isku waddan ah, waxaa jira kala duwanaansho waqti. Si kastaba ha noqotee, Japan ugama dheera bariga iyo galbeedka. Japan gudaheeda, dhulku wuxuu ku dheeraadaa waqooyiga iyo koonfurta, laakiin bariga iyo galbeedka ma ahan mid aad u dheer oo waxaa lagama maarmaan ah in aagga waqtiga loo kordhiyo labo ama in ka badan. Bakaylaha ku yaal boggan wuxuu ku nool yahay jasiiradda Ookuno ee Takehara City, gobolka Hiroshima. Kaliya waxaa jira qiyaastii 20 bini'aadam jasiiraddan, laakiin 700 bakayle ayaa jooga. Buugga "Alice's Adventures in Wonderland", bakayle ayaa ku degdegaya inta uu daawanaayo saacadda jeebka. Haddii aad tagto jasiiradda Oono, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto bakayle sidan oo kale ah oo qarsoodi ah. Waan ku faraxsanahay inaad aqrisay ilaa dhamaadka. Ku noqo "Aasaasi" aniga igu saabsan Bon KUROSAWA Muddo dheer ayaan u shaqeynayay sidii tifaftire sare Nihon Keizai Shimbun (NIKKEI) waxaanan hadda u shaqeeyaa sidii qoraa web madax banaan. NIKKEI, ...
Ciidaha Japan! Soo-jiidashada dalxiiska ayaa dadku ku badan yihiin bilaha Gu'ga Dahabka ah
Waxaa Japan ka jira 16 fasax oo sharci ah. Haddii ciidaha ay soo galaan Axadda, maalmaha ugu dhow ee maalmaha shaqada (badanaa Isniinta) intaas ka dib waxay noqon doonaan fasax. Ciidaha japan ayaa aad loogu uruuriyaa usbuuca laga bilaabo dhammaadka Abriil ilaa bilowga Maajo. Toddobaadkan waxaa loo yaqaan "Toddobaadka Dahabiga ah". Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira maalmo badan oo fasax ah laga bilaabo bartamaha Sebtember ilaa dhammaadka Sebtember toddobaad. Toddobaadkan waxaa loo yaqaan "Toddobaadka Silver". Fasaxa iskuulka waa laga bilaabo dhamaadka Luulyo ilaa dhamaadka Ogosto. Fadlan la soco in mudooyinkan meelaha dalxiiska ee ku teedsan dalka ay ku soo badanayaan. Maalinta Sannadka Cusub: 1da Janaayo Torii iridda Meiji Jingu Shrine, Harajuku, Tokyo = Shutterstock Sannadka Cusub waa ciida ugu muhiimsan dadka Japan. Dad badan ayaa fasax qaadan doona laga bilaabo Diseembar 29-keeda oo ay waqti la qaadan doonaan qoyskooda Maalinta Sannadka Cusub. Dadku waxay booqdaan cibaado ama macbudyo si ay ugu tukadaan sanadka cusub. Imaatinka Maalinta Da'da: Isniinta labaad ee Janaayo Haweenka Dhalintayar ee Jabaananka ah ee xidhan kimonos-ka da'da soo socota, si loogu dabaaldego sanadka ay labaatan jirsanayaan = Haweenka Shutterstock ee kimono kuleh banaanka xarunta dhaqanka inta lagu gudajiro dabaaldega Maalinta Da'da ee Kagoshima City, Japan = Shutterstock Maanta oo kale, Jabaaniyiinta waxay u dabaal degaan kuwa jira 20 sano. Degmooyin badan ayaa u dabaaldega sharafkooda. Dhallinyaradu waxay xirtaan Kimono ama Suits waxayna u dabaal dagaan Da'da. Maalinta Aasaaska Qaranka: Febraayo 11th Waa maalin loo dabaaldego aasaaska Japan. Sida laga soo xigtay halyeeygii hore, Emperor Jinmu, imbaraadoorkii ugu horreeyay, ...
Dhacdooyinka sanadlaha ah ee Japan! Sannadka Cusub, Hanami, Obon, Kirismaska ​​iyo waxyaabo kaloo badan!
Weli waxaa jira dhacdooyin dhaqameedyo badan oo sanadle ah oo ka dhaca Japan. Dad badan oo reer Japan ah ayaa doorta inay qoysaskooda kula dabaal degaan munaasabadahaas sanadlaha ah. Dhawaan, dalxiisayaal badan oo ajnabi ah ayaa ku riyaaqay dhacdooyinka noocaas ah. Mid ka mid ah dhacdooyinkan waxaad ka heli kartaa fikrad wanaagsan oo ku saabsan dhaqanka Jabbaan. Maqaalkani wuxuu faahfaahinayaa dhacdooyinkan sanadlaha ah. Dhacdooyinka Sanadka Cusub Dhacdooyinka sanadlaha ah ee Sannadka Cusub waa kuwa ugu waaweyn Japan. Laga bilaabo dhamaadka sanadka dhacdooyinka soo socda ayaa dhaca sanad walba. Joya no kane "Joya no kane" waa munaasabad sanadle ah oo lagu qabto macbadyada Buddhist = Shutterstock "Joya no kane" waa munaasabad sanadle ah oo lagu qabto macbadyada Buddhist. Saqbadhkii Diseembar 31-keedii wadaaddadu waxay garaacaan jalaska weyn ee macbudka 108 jeer. Waxaa jira wax u muuqda 108 walwal aadanaha. Macnaha ka dambeeya dhawaaqa dawannadu waa inuu kaxeeyo dareenkaas. Toshi-Koshi soba "Toshi-Koshi soba" waa baasto sida caadada ah loo cuno bisha Diseembar 31deeda. Jabbaanku waxay cunaan baasto dheer iyagoo rajaynaya inay nolol nasiib leh ku hogaamin doonaan. Hatsumode Crow of Hatsumode at Asakusa in Tokyo, Japan. Hatsumode waa booqashadii ugu horeysay ee Shinto ama booqashada macbadka Buddhist ee Sanadka Cusub ee Jaban = Shutterstock "Hatsumode" waa booqashadii ugu horeysay ee sanadka ee macbud ama macbud. Sannadka Cusub, macbud kasta iyo macbudku waxaa ku badan dad badan oo booqashooyinkan sameeya. Setsubun "Setsubun" waa dhacdo dhaqameed japanese = Shutterstock "Setsubun" waa dhacdo dhaqameed si sharka looga kaxeeyo. Waxaa la qaban doonaa horaanta bisha Febraayo. Dadku waxay digirta ku tuuraan guriga iyagoo ku dhawaaqaya "Oni-wa-soto, fuku-wa-uti," oo macnaheedu yahay "Baxsan ...
Cimilada iyo Cimilada Sanadlaha ah ee Japan! Tokyo, Osaka, Kyoto, Hokkaido iwm.
Markaad qorsheyneyso booqashada Japan, sidee bay cimilada iyo cimiladu noqon doonaan? Maqaalkan waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo bandhigo cimilada iyo cimilada Japan iyo astaamaha goob kasta. Cimilada Japan waa kala jaad Jaban waa jasiirad dhererkeedu dhan yahay 3000 oo kilomitir waqooyiga iyo koonfurta. Waxay ka kooban tahay 4 jasiirado waaweyn iyo qiyaastii 6,800 jasiirado yaryar. Cimilada ayaa aad ugu kala duwan woqooyiga Hokkaido iyo koonfurta Okinawa. Jiilaalka Hokkaido waa mid aad u qabow, halka Okinawa uu yahay mid fudud xitaa xilliga jiilaalka. Meelaha leh baraf xoog leh xilliga qaboobaha ayaa ah dhinaca badda Japan ee Hokkaido iyo dhinaca badda Japan ee waqooyiga Honshu. Xogta: Wakaaladda Saadaasha Hawada ee Japan Japan Wakaaladda Saadaasha Hawada Japan Cimilada Jiilaalka: Baraf ka da'aya Jiilaalka Xeebta Weyn ee Japan ee Jaban = Shutterstock Sida laf-dhabarta jasiiradaha, safafka buuraha ayaa muddo dheer socda. Baaxadda buurtan awgeed, cimilada dhinaca Baasifigga ee jasiiradaha Japan iyo dhinaca Badda Japan aad ayey u kala duwan yihiin. Jiilaal kasta, dhinaca badda Japan ee dalka, daruuro badan oo qoyan oo ka yimaada badda Japan ayaa isku dhaca buuraha. Halkan, barafka badanaa wuu daataa. Dhanka kale, dhinaca Baasifigga, cimilada nadiifka ah way sii socon doontaa xilliga jiilaalka. Haddii aad tagto aagagga galbeedka ee buurta inta lagu jiro xilliga qaboobaha, gaar ahaan Hokkaido iyo waqooyiga Honshu, waxaad awoodi doontaa inaad aragto muuqaalka barafka. Xilli roobaadka Japan: Qiyaastii Juun Haweeney dhar kimiko dhaqameed ah oo reer Japan ah oo socota iyadoo loo marayo habka loo sharraxay hydrangea buluug ah oo qurux badan (macrophylla) at ...
Dhulgariirrada & Volcanos-ka Japan
Japan gudaheeda, dhulgariirro ayaa si isdaba joog ah u dhaca, min gariirro yaryar oo uusan jidhku dareemin illaa masiibooyin waaweyn oo dilaa ah. Kuwo badan oo reer Jabaan ah ayaa dareemaya dareen xiisad iyagoo aan ogayn goorta ay musiibo dabiici ahi dhici doonto. Dabcan, suurtagalnimada in si dhab ah loola kulmo musiibo dabiici ah oo weyn ayaa aad u yar. Inta badan dadka Jabbaan waxay ku noolaayeen inay ka weynaadaan da'da 80. Si kastaba ha noqotee, dareenkan qalalaasaha wuxuu saameyn weyn ku leeyahay ruuxda Jabaan. Aadanuhu kama adkaan karo dabeecadda. Dadbadan oo Jabuutiyaan ah ayaa dareensan inay muhiim tahay in la noolaado dabeecada. Maqaalka waxaan kaga wada hadli doonaa dhul gariirkii dhowaa iyo qaraxyadii Volku. Dhulgariirrada Japan Haddii aad joogtay Japan dhowr sano, waxaad la kulmi doontaa ugu yaraan hal dhulgariir yar naftaada. Dhismooyinka Jabbaan waxaa loogu talagalay inaysan dumin xitaa haddii dhulgariir weyn dhaco. Sidaa darteed, looma baahna in la baqo. Si kastaba ha noqotee, haddii aad joogtay Japan sannado badan, waxaa suurogal ah inaad la kulanto dhulgariir weyn. Sanadkii 2011, markii Dhulgariirkii Weyn ee Bariga Dhexe ee East East Japan uu ka dhacay, waxaan ka shaqeynayay dhisme dabaq ah oo ku yaal Tokyo waxaanna ku soo arkay dhismaha si arxan darro ah. Dhulgariir weyn oo ka dhacay Bariga Japan Bariga Bariga Japan oo sababay dhulgariir weyn, Maarso 11, 2011 Dhulgariirkii Weyn ee Bariga Japan (Higashi-Nihon Daishinsai) waa dhulgariir aad u weyn oo ku dhuftay waqooyiga Honshu bishii Maarso 11, 2011. In ka badan 90% qiyaastii 15,000 dhibanayaasha wuxuu u dhintay dhulgariirkii dhacay dhulgariir kadib. Kadib dhulgariirkii weynaa ee loo yaqaan 'Hanshin Dhulgariir' oo dhacay 1995, dhismayaasha-dhulgariirku si firfircoon ayuu u socday ...
Waxa la sameeyo haddii ay dhacdo duufaan ama dhulgariir Japan
Xitaa gudaha Japan, waxyeelada ka soo gaarta duufaanta iyo roobabka culus ayaa sii kordhaya sababtoo ah kuleylka adduunka. Intaa waxaa dheer, dhulgariirrada badanaa waxay ka dhacaan Japan. Maxaad sameyneysaa haddii duufaan ama dhulgariir dhaco inta aad ku safreyso Japan? Dabcan, uma badna inaad la kulanto kiis sidan oo kale ah. Si kastaba ha noqotee, waa fikrad wanaagsan in la ogaado ka-hortag-celinta haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah. Marka, boggan, waxaan ka wada hadli doonaa waxa la sameeyo marka ay musiibo dabiici ahi ka dhacdo Japan. Haddii duufaano ama dhulgariir weyn kugu dhufato hadda, soo degso barnaamijka dawladda Japan “talooyin xagga amniga ah”. Qaabkaas waxaad kuheleysaa macluumaadkii ugu dambeeyay. Sikastaba, iska hubi inaad haysatid meel aamin ah oo aad gabbaad ka dhigi karto. La hadal dadka reer Japan ee kugu xeeran. In kasta oo, guud ahaan dadka reer Japan aysan ku fiicnayn ku hadalka Ingiriiska, hadaad dhib ku jirtid waxay wali rabaan inay ku caawiyaan. Haddii aad isticmaali karto kanji (xarfaha Shiinaha), waad kula xiriiri kartaa sidan. Hel macluumaad ku saabsan cimilada iyo dhulgariirka Xilliga xagaaga ee duufaanta lagu garaacayo garoonka diyaaradaha ee Okinawa = xirasho-bixi Mushaharka saadaasha hawada! Rakaab ka yimid dibada ayaa ii sheegay in "dadka reer Japan ay jecel yihiin saadaasha hawada." Xaqiiqdii, waxaan hubinnaa saadaasha hawada maalin walba. Tani waa sababta oo jawiga Japan uu isu beddelayo daqiiqad kasta. Japan waxay leedahay isbeddelo xilliyeed iyo sidoo kale duufaano inta badan laga soo bilaabo xagaaga illaa deyrta. Intaa waxaa sii dheer, dhawaanahan, waxyeelada roobka culus ayaa kordhay sababtoo ah saameynta kuleylka adduunka. Intaa waxaa u dheer, dhulgariirrada iyo qaraxyada volcanic-ka ah ayaa si joogto ah uga dhaca Japan. Haddii aad u safreyso Japan, waan ...
Amiirka Jabbaan iyo Calanka Japan
Markaad u safreyso Japan waxaad awoodi doontaa inaad dareento raaxeysi qoto dheer haddii aad aqoon aasaasi ah u lahayd taariikhda Jabbaan. Boggan waxaa ku jiri doona kooban kooban oo ku saabsan Imbaraadoorrada muhiimka u ah taariikhda Jabbaan. Intaa waxaa dheer, waxaan ku dari doonaa macluumaad ku saabsan calanka qaranka Jabaan. Imbaraadooriyadda Japan Muuqaalka Qasriga Imperial, Tokyo. Jabbaan = Shutterstock Japan waxay adeegsanaysay Nidaamka Imbaraadooriga ilaa waqtiyadii hore. Imbaraadooriyada waxaa Jabaan loogu yeeraa "Tenno". Sida ku xusan halyeeyga, imbaraadoorkii ugu horreeyay wuxuu ahaa Emperor Jinmu. Waxaa la sheegaa in Emperor Jinmu la caleemo saaray qiyaastii 660 BC laakiin ma hubo. Dhaxalka carshiga waxaa fuliyay dhaxal mudo dheer. Dastuurkii hore ee la ansixiyay 1889, Imbaraadoorku wuxuu ahaa gobanimo. Si kastaba ha noqotee, Dastuurka cusub ee la soo saaray 1946, muwaadiniinta waxaa la siiyay awood ay wax ku xukumaan wuxuuna Emperor noqday "astaan". Maanta, Qoyska Boqortooyada, oo udub dhexaad u ah Emperor, waxay ku hawlan yihiin shaqo astaan ​​ah. Shaqadan waxaa ka mid ah ka qeybgalka dhacdooyinka gudaha iyo kuwa caalamiga ah. Qoyska Boqortooyada waxay fuliyaan "Ippan Sanga" sanadkiiba laba jeer si ay bulshada ugu salaamaan Tokyo's Imperial Palace. Tani waxay dhacdaa Janaayo 2 iyo Diisambar 23. Waqtigaan, dad aad u tiro badan ayaa yimaada Qasriga Imperial si ay u soo qabtaan aragtida qoyska shaqsi ahaan, Fiidiyowyo lagu taliyay oo ku saabsan Imbaraadoorka Japan Calanka Jabbaan Calanka Japan Calanka Japan waxaa loo yaqaan "Hinomaru ". Wareeg casaan weyn ayaa lagu sawiray salka cad. Wareegga cas wuxuu metelaa qorraxda soo baxaysa. Jabbaanku waxay caabudi jireen qorraxda ...
Sawirada: Maalmaha roobka ee Japan - Xilliyada roobku waa June, Sebtember iyo Maarso
Sawirada: Macbudka Sensoji ee Asakusa, Tokyo
Sawirada: Magiciga Macbudka Rurikoin ee Kyoto
Oktoobar gudaha Japan! Caleemaha dayrta waxay ka bilowdaan aagga buurta!
Sawirada: Dhaqanka Jambiyada Jabbaan -Arashiyama Bamboo Forest, iwm.
Sawirada: Macbadka Daitokuji ee kuyaala Kyoto -Waxa Dunida Zen ee Iskudhafka Nolosha
Sawirada: Macbadka Kodaiji ee Kyoto
Bisha Jeenawari! Aynu ku raaxeysto jiilaalka Japan ugu fiican!
Sawirro: Xadiiqadda Hanamiyama ee ku taal Degmadda Fukushima
U qorshee safar
All qorshe safar Goorta la aadayo (16) Kalandarka dhacdooyinka (15) Cimilo iyo Cimilo (65) Meelaha ugu Fiican (30) Hoyga (3) Tigidhada iyo Dalxiisyada (2) Kala-bixinta (11) Dhar (6) luqadda (1) Lacagta (1) Waqtiga Farqiga (1) Internet (1) Qaxidda (3) Baro (83) Nolol iyo Dhaqan (71) Taariikh (4) Goobaha la xiriira (7)
Dhammaan Goobaha Hokkaido (62) Honshu: Tohoku (47) Gobolka Aomori (9) Gobolka Akita (11) Gobolka Iwate (5) Gobolka Miyagi (5) Gobolka Yamagata (5) Gobolka Fukushima (8) Honshu: Kanto (81) Tokyo (31) Magaalada Tokyo (5) Gobolka Kanagawa (8) Gobolka Chiba (4) Gobolka Saitama (3) Gobolka Ibaraki (8) Degmada Gunma (6) Tochigi Gobolka (7) Honshu: Chubu (66) Shizuoka Gobolka (6) Gobolka Yamanashi (11) Gobolka Nagano (15) Xafiiska Nigata (4) Toyama Gobolka (7) Ishikawa Gobolka (7) Gobolka Fukui (4) Gobolka Gifu (13) Aichi Gobolka (3) Gobolka Mie (5) Honshu: Kansai (78) Shiga Gobolka (6) Kyoto (33) Gobolka Kyoto (2) Gobolka Nara (6) Gobolka Wakayama (4) Osaka (7) Gobolka Osaka (4) Gobolka Hyogo (8) Honshu: Chugoku (33) Okayama Gobolka (6) Gobolka Hiroshima (11) Gobolka Yamaguchi (2) Gobolka Tottori (4) Shimane Prefecture (8) Shikoku (17) Gobolka Tokushima (5) Gobolka Kagawa (4) Gobolka Ehime (3) Gobolka Kochi (1) Kyushu (37) Gobolka Fukuoka (5) Saga Gobolka (1) Nagasaki Gobolka (7) Gobolka Kumamoto (8) Oita Gobolka (8) Gobolka Miyazaki (3) Kagoshima Gobolka (3) Gobolka Okinawa (13)
Dhammaan Waxyaabaha Xiisaha Leh Tigidhada iyo Dalxiisyada (2) Dharka (8) Dukaameysi (14) Cuntada Jabbaan (15) Meelaha Barafka (77) Cherry Blossoms (34) Ubax (32) Jardiinooyinka Japan (16) Caleemaha Dayrta (54) Onsen (22) Xayawaanka iyo kalluunka (10) Baaskiil (67) Raacitaan muuqaal ah (29) Jardiinooyinka Madadaalada (6) Aragtida Habeenkii iyo Iftiiminta (39) Ciidaha (23) Macbudyo iyo Xurumo (51) Qalcado (33) Goobaha Taariikhiga ah (59) Samurai & Ninja (14) Farsamooyinka Dhaqanka (5) Matxafyada (8) Manga & Anime (7) Xeebaha (11) Ciyaaraha (14) Warshadaha iyo Ganacsiga (8) Gaadiidka (12)
All Seasons Jiilaal (52) Diisambar (18) Janaayo (15) Febraayo (18) Guga (47) Maajo (13) Maarso (12) Abriil (17) Xagaaga (37) Juun (12) Luulyo (16) Ogosto (15) Dayrta (47) Sebtember (16) Oktoobar (16) Nofeembar (17)
Dhibco caan ah
All Tags Abashiri (1) Aizu-Wakamatsu (2) Akihabara (4) Aomori (3) Arashiyama (4) Asahiyama Zoo (1) Qorno (3) Ashikaga Flower Park (3) Aso (5) Qorno (6) Biei (19) Macbadka Chusonji (3) Daisetsuzan (5) Dotonbori (1) Matxafka Edo-Tokyo (2) Macbadka Eikando Zenrinji (4) Qorno (3) Fuji-Q Highland (2) Fukuoka (3) Furano (17) Fushimi Inari-taisha Shrine (4) Ginza (3) Ginzan Onsen (4) Gion (1) Hakodate (16) Hakone (4) Matxafka Hawada Furan ee Hakone (1) Hakuba (6) Macbadka Hasedera (1) Qasriga Himeji (4) Matxafka Nabadda ee Hiroshima (4) Hitachi Seaside Park (4) Huis Ten Bosch (1) Qasriga Imperial (2) Cibaadada weyn ee 'Ise' (2) Cibaadada 'Ise' (1) Qorno Taisha (5) Jigokudani Snow Monkey Park (3) Kaiyukan (1) Kakunodate (5) Qorno (6) Kamikochi (5) Qorno (5) Beerta Kenrokuen (6) Macbadka Kinkakuji (4) Macbadka Kiyomizudera (7) Kobe (3) Qorno (4) Kumamoto Castle (2) Qorno Kodo (4) Harada Kawaguchiko (2) Matsumoto Castle (4) Meelaha Meiji-jingu (4) Miyajima (10) Mt. Fuji (13) Mt. Taaka (3) Mt. Qorno (4) Nabana maya Sato (3) Nagasaki (3) Nara Park (4) Nikko (1) Nikko Tosho-gu (4) Niseko (7) Odaiba (2) Oirase durdur (3) Okinawa (9) Qaska Castle (3) Otaru (14) Oze (4) Jasiiradda Sakurajima (2) Sapporo (22) Sendai (3) Macbadka Sensoji (3) Shibuya (2) Shinjuku (4) Shinjuku Gyoen National Garden (2) Shirakawago (9) Shiretoko (14) Qorno Gorge (3) Qorno (4) Tateyama Kurobe Alpine Route (6) Macbadka Todaiji (4) Tokyo Disney (1) Matxafka Qaranka ee Tokyo (2) Tokyo Skytree (3) Tokyo Tower (3) Ueno (1) Umeda (1) USJ (3) Qorno (2) Yokohama (2) Yufuin (3) Qorno (5)
Fadlan dhagsii "Gudbi" kadib xulashada
Hokkaido! 21 Meelo Dalxiis oo caan ah iyo 10 Madaar
Hokkaido waa jasiiradda labaad ee ugu weyn Japan kadib Honshu. Waana waqooyi-bari iyo waaxda ugu weyn. Hokkaido ayaa ka qabow jasiiradaha kale ee Jabaan. Sababta oo ah horumarka ay sameeyeen Jabbaan ayaa dib u dhacay, waxaa jira dabeecad aad u wanaagsan oo qurux badan Hokkaido. Boggan, waxaan ku soo bandhigi doonaa dulucda ...
Mount Fuji: 15 meelood oo ugu fiican oo lagu daawado Japan!
Boggan, waxaan ku tusi doonaa aragtida ugu wanaagsan ee lagu arko Mt. Fuji. Buurta. Fuji waa buurta ugu dheer dalka Japan oo dhererkeedu yahay 3776 mitir. Waxaa jira harooyin ay sameeyeen hawlo foolxun oo Mt. Fuji, iyo abuurista muuqaal qurux badan oo hareerahaas ah. Hadaad rabto inaad aragto ...
Jabbaan Onsen ayaa si gaar ah loogu taliyay dalxiisayaasha shisheeyaha ah
Sababtoo ah Japan waa dal leh buulal badan, biyo-biyoodka waxaa ku kululaanaya magma of volcano, Ilo biyo ah Onsen (Biyo kulul) ayaa ka soo baxa halkan iyo halkaas. Waqtigan xaadirka ah, waxaa la sheegayaa in ay jiraan in kabadan 3000 meelood oo dalxiis ah gudaha Japan. Waxaa ka mid ah, waxaa jira meelo badan oo caan ka ah dalxiisayaasha shisheeyaha ah. Markay ...
12 Dhismooyinka iyo Meelaha Macbudyada Ugu Fiican ee Japan! Fushimi inari, Kiyomizudera, Todaiji, iwm.
Dalka Japan waxaa ku yaal goobo cibaado iyo macbudyo badan. Hadaad tagtid meelahaas, waxaad xaqiiqdii dareemi doontaa deganaan iyo deganaan. Waxaa jira goobo cibaado iyo macbudyo qurux badan oo aad jeclaan laheyd inaad ku dhejiso bartaada Instagram. Boggan, bal aan ku soo bandhigo qaar ka mid ah goobaha caanka ah iyo macbudyo aad ugu caansan ...
Xilliyada Jabaan! Dhaqanka ayaa kobciyay isbedelka afarta xilli
Japan waxaa ka jira isbedel xilli xilli cad ah. Xagaagu aad ayuu u kulul yahay, laakiin kuleylku weligiis ma dhammaan doono. Heerkulka ayaa si tartiib tartiib ah u dhaca oo caleemaha geedahana waxay isu beddelaan casaan iyo hurdi. Ugu dambeyntiina, jiilaal adag ayaa raaci doona. Dadku waxay u adkaystaan ​​qabowga waxayna sugayaan in guga diirimaad yimaado. Tani ...
Xuquuqda daabacaadda © Best of Japan , 2022 Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay